Itiyoophiyaan gaaffii miseensa guutuu Federeeshinii Ispoortii Warra Dhaggeettii Hin-qabneef dhiheessite yaa’i ji’a tokko booda deebii argata - ! - OBN
Itiyoophiyaan gaaffii miseensa guutuu Federeeshinii Ispoortii Warra Dhaggeettii Hin-qabneef dhiheessite yaa’i ji’a tokko booda deebii argata
[Dhrtvo 14 10 2009] Gaaffiin miseensa guutuu Federeeshinii Ispoortii dhaggeettii hin-qabnee idil-addunyaa ta'uuf Itiyoophiyaan dhiheessite yaa'i ji'a tokko booda Tarkiitti geggeffamu irratti deebii akka argatu eegama.
Shaampiyoonaa Warra Dhaggeettii hin-qabnee Idil-addunyaa 23ffaa irratti Itiyoophiyaan akka hirmaattuuf waamichi akka dhihaateefis Federeeshiniin Ispoortii Warra Dhaggeettii hin-qabnee Itiyoophiyaa beeksiseera.
Dorgommiin Ispoortii warra dhaggeettii hin-qabnee Ispoortii Olompikii Paaraa jalatti ture kan geggeffamaa ture. Federeeshiniin Ispoortii Dhageettii Hin-qabnee Idil-addunyaa hundeeffamuusaan wal-qabtee garuu Ispoortiiwwan dhaggeeettii warra hin-qabnee Olompika Paaraa keessaa akka ba'u taasifameera.
Federeeshiniin Ispoortii Dhaggeettii Warra Hin-qabnee Itiyoophiyaas Koomishinii Ispoortii duraanii Ministeera Dargaggootaa fi Ispoortii ammaan beekamtii argatee bara 2006tti bifa Federeeshiniin hundaa'uu danda'eera.
Federeshinichi bara 2007 jalqabee biyya keessatti dorgommiiwwan gara-garaa qopheessuun Federeshinii Ispoortii warraa dhageettii hin qabnee Idil-addunyaa keessaatti yeroodhaaf miseensa ta'uu danda'eera.
Hogganaan Waajjira Federeeshinii Ispoortii Warra Dhaggeettii hin-qabnee Itiyoophiyaa Obbo Daanyee Maqoyyaa akka ibsanitti Itiyoophiyaan miseensa yeroofii Federeshinii Ispoortii Warra dhaggeettii hin-qabnee Idil-addunyaa taatee turteetti.
Gaaffiin miseensummaa guutuu ishee ammoo yaa'ii Waliigalaa Idil-addunyaa Adoolessa 9 hanga 11, 2009tti Tarkiitti geggeeffamu irratti murtaa'a jedhaniiru.
Itiyoophiyaan biyya keessatti dorgommii ispoortii warri dhaggeettii hin-qabne qofti irratti hirmaatan qopheessuunshee, miseensa Konfedereshinii Warra Dhaggeettii Hin qabnee Afriikaa fi Miseensa Boordii Konfedereshinichaa akka taatuuf filatamuunshee miseensa guutuu akka taatu ishee gargaara jedhaniiru.
Itiyoophiyaan miseensa Federeshinii Warra Dhaggeettii Hin-qabnee Idil-addunyaa yoo taate dorgommiiwwan idil-addunyaa irratti nihirmaatti deggrasa meeshaa fi ogummaas ni-argatti.
Yaa'ii waliigalaa malees Shaampiyoonaan warra dhaggeettii hin qabnee idil-addunyaa 23ffaa Adoolessa 11 hanga 23, 2009 Tarkiitti geggeffama.
Dorgommii kanaarratti Itiyoophiyaan akka hirmaattu federeeshinichaan waamichi dhihaateeraafi.
Dorgommii kanaarratti hirmaachuufis ispoortii atleetiksii irratti sa'aatii gaarii kan qaban atleetonni dhaggeettii hin-qabne ja'a filatamanii dhuunfaatti shaakalatti jiru jedhaniiru hoggantichi.
Atileetota 6n keessaa lama dubartoota.
772 Views 6/21/17